China ChiGerman mhando hose clamp Mugadziri uye Mafekitori | Glorex
Mhando yeGerman hose clamp
Mhando yechiGerman hose clamp ine 9mm uye 12mm bandwidth, Tooth clasp pakati.
Mhete isina-yakanetepa yemhando yeGerman hose clam inova nechokwadi chekuti yakanyorova silicone hose haina kupunzika kana kudimburwa panguva yekumisikidza uye yekupedzisira kushandisa soro, uku uchichengetedza kutendeka kwekubatana nekupa chisimbiso chakasimba, zvinoenderana neDIN3017.
Iyo yakajairika kurongedzwa ibhegi repurasitiki, uye bhokisi rekunze iri bhokisi.Iri pane chinyorwa pane bhokisi.Special packing (pachena chena bhokisi, kraft bhokisi, ruvara bhokisi, plastiki bhokisi, chishandiso bhokisi, blister, nezvimwewo)
Mhando yeGerman hose masampu anoshandiswa zvakanyanya mu: mota, maindasitiri uye maindasitiri egungwa.
Mhando yechiGerman hose clamp yakasimba uye inogara kwenguva refu. Rutivi rwemicheka rune chekudzivirira pane hose. Iyo yekushongedza concavex uye concave dhizaini mukati ine zvirinani kugadzirisa mhedzisiro, izvo zvinogona kudzivirira hose kubva pasi kana kudonha kumashure.
PC / bhegi
Yepfuura: Wiri waya hose clamp
Inotevera: Mhando yechiGerman hose inosunga netiini
Mhando yechiGerman hose clamp isina welding (iine s ...
Mhando yechiGerman hose inosunga netiini
Mhando yechiGerman hose inosvina pasina kutambisa